Barnaamijka Tartan iyo Tacliim oo lagu tar-tamayo wareegiisii labaad (2) – Radio Daljir
Barnaamijka Tartan iyo Tacliim oo lagu tar-tamayo wareegiisii labaad (2)
Agoosto 6, 2012 4:51 b 0
Bosaso, Aug 06 – Barnaamijka Tartan iyo Tacliim oo ay ku tartamaan dugsiyada sare ee deegaanada Puntland, islamarkaana galay wareegii labaad waxaa xalay ku tartamay sidii caadadu ahayd afar ka mid ah dugsiyada barnaamijka ee usoo baxay wareega labaad.
Qaybtii hore ee barnaamikka? ayaa waxaa ku tartamay dugsiga Nawaawi Boosaaso iyo Al-waaxa Garoowe Bosaso ,dusgi kasta ayaa waxaa la waydiiyay lix su’aalood sida sharciga barnaamijka uu qabo.
Gudoomiye kuxigeenka? barnaamijka Tartan iyo Tacliim Jaamac Yaasiin Jaamac ayaa gabagbadii ku dhawaaqay natiijada tartanka dugsiyada sare ee Al-Waaxa Garoowe ? iyo Imaamu Nawaawi? Bosaso.
Dugsiga Imaamu Nawawi? Boosaaso, oo la waydiiyay lix su’aal oo uu xaqa u lahaa ayaa waxaa uu ka jawaabay shan su’aalood oo? ka mid ah su’aalihiisii, waxaa uu qalday hal su’aal, kafaa’iidaysi ma helin sidaasi ayuu ku helay toban dhibcood.
Dugsiga sare ee Al-waaxa Garoowe? oo la waydiiyay lix su’aalood oo uu xaqa u lahaa, ayuu ka jawaabay lixdiisii su’aalood, sidaasi waxaa uu ku helay 12-darajo guushana ay ku raacday, waxaana uu dhanka kalle uu usoo baxay wareegga sadexaad ee barnaamijka.
Qaybtii labaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliim ayaa waxaa ku baratamay dugsiyada sare ee kala ah Manaaratu Baydaa iyo Burtinle Secondary.
Dugsiga Burtinle Secondary oo la waydiiyay lix su’aalood waxaa uu ka jawaabay? laba su’aal oo uu ku helay 4-darajjo, kafaa’iidaysi ahaana? waxaa uu u helay laba su’aal oo u dhiganta laba darajo, wadarta guud dugsiga sarre Burtinle Secondary? uu helay ayaa noqotay 6- darajo.
Dugsiga sare ee Manaaratu Baydaa Bosaso? ayaa waxaa la waydiiyay lix su’aal, waxaa uu ka jawaabay afar? ka mid su’aalihii la waydiiyay ,waxaa uu helay sideed darajjo guushana ay ku raacday.
Caawa 9:00pm xiliga Geeska Afrika waxaa tartamaya.
Al-Najax Bosaso Vs Nugaal Garowe
Bosaso Secondary Vs Nawawi Garowe